Chate Sat | Reliable freelancers for your business သင့်တော်တဲ့... - Chate Sat | Reliable freelancers for your business
သင့်တော်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ?
လူတိုင်းဟာ အချိန်အကန့်သတ်နှင့် အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ စီးပွားရေးတစ်ခု(သို့) တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ အားလုံးအတွက် အချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အလုပ်တွေအပြင် အသေးအဖွဲ့ကိစ္စတွေကအစ ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ အချိန်ပြည့်၀န်ထမ်းတွေခန့်မယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ချို့သော အလုပ်တွေဟာ အမြဲလုပ်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် မသင့်လျော်ပြန်ပါဘူး။ အခုတော့ ထိုအချင်းအရာတွေ အတွက် ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုပြီး ထိုပြဿ နာတွေကို အလွယ်တကူပဲ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း သတိပြုရမည့်အချက် တစ်ချက်တော့ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မြောက်မြားစွာသော အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေထဲကနေ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပညာရှင်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်တော်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ယောက် ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်သင့်သလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
♦️ ငွေကြေးထက် အရည်အသွေးကိုကြည့်ပါ
တော်တော်များများ ကြုံတွေ့တတ်ရတဲ့ အကြောင်းအရာလေးပါ။ ဈေးအသက်သာဆုံး၊ ဈေးအချိုဆုံးဆို လူတိုင်းကြိုက်တတ်တာ ဓမ္မတာပါ။ တစ်ချို့ဆို ဈေးဆစ်ရတာတောင် အကျင့်လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ အဲလိုလုပ်လိုက်မိရင် အနည်းငယ်မှားယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ ဈေးပေါပေါတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို အကုန်ခံမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်ကောင်းတွေလိုချင်ရင်တော့ ထိုက်တန်တဲ့ အရင်းနှီးတစ်ခုတော့ ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရည်သွေးကောင်းကောင်းတွေ အသုံးပြုခြင်းဟာ မိမိ Brandရဲ့ တန်ဖိုးကို မြင့်တက်စေသလို၊ ယုံကြည် လေးစားမှု တွေကိုလည်း သွယ်၀ိုက်သော နည်းလမ်းကနေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ကန့်သတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏအတွင်းမှာပဲ အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တောင် အချိန်ယူပြီး အလွတ်တန်းပညာရှင် တစ်ယောက်ချင်းစီ အရည်အသွေးကို စိစစ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ထူးချွန်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အပိုင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့ ပညာရှင်မျိုးကိုသာ ရှာတွေ့ပြီ ဆိုရင်တော့ အရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိပြီး အင်မတန်အသုံး၀င်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေရဲ့ အရည်အသွေးနှင့် အရည်အချင်းကို ဘယ်လိုအကဲဖြတ်နိုင်သလဲဆိုရင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ၎င်းတို့ရဲ့ Portfolio တွေကိုကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေရဲ့ Portfolio တွေဟာ သူတို့အတွက် အခိုင်မာဆုံး သက်သေပြချက်တွေဖြစ်တာကြောင့် ပညာရှင်တိုင်းထည့်တတ်ကြတာ အမှန်ပါ။ Portfolio မရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိတယ် ဆိုရင်တော့ သေချာ သတိထားပြီး ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Portfolio မရှိသေးတာဟာ အတွေ့အကြုံမရှိ သေးတာဖြစ်နိုင်သဖြင့် သင့်အနေနဲ့ အချိုသာဆုံးဈေးနှင့် ရနိုင်သော်လည်း ရလဒ်ကောင်းထွက်ဖို့တော့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ Portfolio တွေကို အကုန်မပြနိုင်ရင်တောင်မှ သင့်လုပ်ငန်းနှင့် ကိုက်ညီမယ့် Protfolio ကိုတော့ ရွေးချယ်ညွှန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင် ငှားရမ်းတော့မယ်ဆိုရင် မိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့ ရလဒ်တွေရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ငွေကြေးထက်၊ အရည်သွေးကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာ ပိုပြီးသင့်ပါတယ်နော်!
အင်တာဗျူးခြင်းဟာလည်း သင့်တော်တဲ့ အလွတ်ပညာရှင်တစ်ယောက် ရရှိဖို့များစွာ အထောက်အကူဖြစ် စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိငှားရမ်းမယ့် ပညာရှင်မှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိသလဲ? စိတ်နေသဘောထား? Client အပေါ် ပြောဆိုတုံ့ပြန်မှု အဆင်ပြေ၊မပြေ ? ဆိုတာနှင့် မိမိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်ရမယ့် သဘောတရားတွေကို ရှင်းပြရင်း မိမိနှင့်ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ၊ သင့်တော်မှု ရှိမရှိဆိုတာတွေကို တွေးတော ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ Porfolio တွေကို အရည်အသွေးကောင်းအောင် ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဆီ အပ်တတ်ကြတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထား တဲ့ Portfolio ဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း Portfolio ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို မေးခွန်းလေးတွေမေးပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေမှာ ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ပရောဂျက်က လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ်ငှားရမ်းမယ့် အလွတ်တန်းပညာရှင်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အလုပ်တကယ်လုပ်မလုပ်၊ အရည်အသွေးတကယ် ကောင်းမကောင်း၊ အလုပ်တွေတကယ်ပြီးမြောက်မှုရှိမရှိ ဆိုတာတွေကို အကဲဖြတ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
♦️ မိမိ ပရောဂျက်ကို တကယ် ကူညီမယ့်သူလား?
မိမိအနေဖြင့် ပရောဂျက်တစ်ခုကို တင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့! Freelancing platform ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်ပိုင် လူမှုကွန်ယက်မှာတင်သည်ဖြစ်စေ လာလျှောက်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ အမျိုးမျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ ပရောဂျက် ဖော်ပြချက်တွေကို တကယ်ဖတ်ရဲ့လား? နားလည်ရဲ့လားဆိုတာတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၁။ မိမိတင်ထားတဲ့ ပရောဂျက်အကြောင်းအရာကတစ်ခု အလွတ်တန်းပညာရှင် ရေးထားတဲ့ proposal က သူ့ဆီမှာ ဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ပါတယ် စသည်ဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် Solution ပေးဖို့အကြောင်းတစ်လုံးမှ မပါပဲ သူ့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုပဲပြောပြီး လာလျှောက်တာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ချင်အားဖြင့် သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ထက် သူ့အတွက်သူပဲ စဉ်းစားနေကြောင်း တိတ်တိတ်လေးရည်ညွှန်းနေပါတယ်။
၂။ “ ဒီပရောဂျက်ပြီးဖို့ ဒီလောက်ကျမယ်!” လုပ်ချင်လုပ် မလုပ်ချင်နေ ဆိုပြီး မျက်နှာလွှဲခဲပစ် တိုတိုပြတ်ပြတ် ပြောပြီးလာလျှောက်တာမျိုး။ ဒါဟာ တနည်းအားဖြင့် သင့်ပရောဂျက်ရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေကို သေချာမဖတ်တာကို ဖော်ပြနေပြန်ပါတယ်။ သင့် ပရောဂျက်အတွက် အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတာမရှိသလို ကံကောင်းရင် ရလိမ့်မယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးလည်းဆောင်နေတဲ့အတွက် သတိထားသင့်ပြန်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်ပဲ သင့်ပရောဂျက်ကိုကူညီပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပညာရှင်ကို ရှာဖွေဖို့အတွက်တော့ အချိန်အနည်းငယ် ပေးသင့်ပါတယ်လို့ ထပ်မံညွှန်းဆိုပါရစေ!
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် သင့်အတွက် ကိုက်ညီသင့်တော်မယ့် အလွတ်ပညာရှင်တစ်ယောက် ငှားရမ်းဖို့အတွက်
၁။ အရည်အချင်းနှင့် အရည်အသွေးကို လေ့လာပါ
၂။ မိမိလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်ကို ရှင်းပြပေးရင်း သင့်တော်မှုရှိမရှိ သုံးသပ်ပါ
၃။ လျှောက်ထားလာတဲ့ proposal တွေကိုကြည့်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ
အားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ လက်တွဲပါလို့ အကြုံပြုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ!
Contributed by Myat Min [email protected] Thit, ChateSat's Freelancer